चीन CharMLite 3D कार्टुन पशु कपहरु ह्यान्डलको साथ, प्यारा आइसक्रिम मग फूड ग्रेड उत्पादकहरू र आपूर्तिकर्ताहरू CharMLite
CharMLite 3D कार्टुन पशु कपहरू ह्यान्डलको साथ, प्यारा आइसक्रीम मग फूड ग्रेड
मोडेल नम्बर: CL-IM001
यो थ्रीडी कार्टुन पशु कप क्षमता 300 मिलीलीटर छ। आन्तरिक कप पीपी सामग्रीले बनेको हुन्छ, पशुको भाग विनाइल (पीवीसी) बाट बनेको हुन्छ। तिनीहरू बच्चाहरूको लागि ठूलो उपहार हुन्। र आइसक्रीमका लागि थिम पार्कहरूमा धेरै स्वागत छ। ग्राहकहरूले आफ्नो अनुकूलन थ्रीडी डिजाइन गर्न सक्दछन्। जस्तै मूर्ति मग बनाउने। र ग्राहकहरू केवल मूर्तिहरूको लागि टुलि pay भुक्तान गर्न आवश्यक छ। कप छैन उपकरणको समय लगभग २-30--30० दिनहरू हुन्छ।
निर्माता: फनटाइम प्लास्टिक
उपलब्ध मोल्डहरू: १००+ बिभिन्न जनावरहरू
जनावरहरू जीवन जत्तिकै जीवन्त छन्।
के तपाईका बच्चाहरूको केक र आइसक्रीम सामान्य कागज वा प्लास्टिकको कन्टेनरमा छन्? किन यो प्यारा थ्रीडी कार्टुन जनावरको कप प्रयास गरिएन? खाना यो कन्टेनरको साथ अझ राम्रो देखिने छ! बच्चाहरूले आफ्नो मनपर्ने जनावरहरू रोज्न सक्दछन्, जस्तै पहेंलो बतख, गोही, निलो परी, क्रोधित चरा, आदि।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यी कन्टेनरको भित्री पीपीबाट बनेको हुन्छ, जुन फूड ग्रेड र बीपीए फ्रि हो। यो बच्चाहरूको लागि सुरक्षित छ। बच्चाहरूले चिन्ता बिना तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्दछन्।
हामी ईन्डरर कप, निलो, खैरो, रातो, पहेंलो, सेतो तपाईंको इच्छानुसार अनुकूलित रंग गर्न सक्दछौं। हामीलाई तपाईंको प्यान्टोन र। मात्र बताउनुहोस्।
बाहिर vinyl (PVC) को बनेको छ, जसले युरोप मानक परीक्षण पनि पास गर्न सक्छ।
Pls हामीसँग सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउँनुहोस् यदि तपाईंले अवस्थित मोल्डका थप फोटोहरू देख्नु आवश्यक छ भने। वा यदि तपाईं आफ्नै डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने।
यदि तपाईंको आफ्नै डिजाइन बनाउनको लागि, हामी कप कप भित्र नम्बरहरूको विस्तृत संख्या पठाउनेछौं। त्यसो भए तपाईं 3D मूर्तिमा आफ्नै मूर्ति डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए हामी तपाईंको अनुमोदनको लागि वास्तविक थ्रीडी नमूना बनाउँछौं। त्यस पछि, हामी खुला वास्तविक मोल्डमा बढ्नेछौं। यदि सबैकुरा उत्तम छ भने, हामी जन उत्पादनमा बढ्नेछौं। उपकरण अनुमोदन पछि डिजाइन स्वीकृति पछि 30० दिन जति हुन्छ।
अघिल्लो: चर्मालाईट नयाँ इन्सुलेटेड टम्बलर दुबै तातो र चिसो पेय पदार्थहरूको लागि १ 16 औंस - बीपीए निःशुल्क
अर्को: CharMLite पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक मेसन ककटेल कप, शटरप्रूफ र BPA- मुक्त पेय जार
बाँस Faber आइसक्रीम मग